Iindaba-Sijolise ekwakheni umoya weqela eliphezulu
Sijolise ekwakheni umoya weqela eliphezulu
Ixabiso likaNingbo Zodi likwakha umoya weqela eliphezulu .Sibambe ukhenketho lweentsuku ezimbini kwidolophu yaseMaoyang, eXiangshan ngo-Agasti 20, ngeentsuku zokuba sikonwabele ukutya kwaselwandle kunye nokuntywila elwandle. Thatha ikhefu emsebenzini wakho oxakekileyo ukonwabela uxolo lwendalo, sihlala imini yonke ukusuka kusasa kude kube sebusuku kunye nabantu esisebenza nabo kunye nosapho, sonwabele ubomi obonwabisayo ecaleni kokusebenza.
Elinye icala, iqela liya kwabelana ngolwazi lweemveliso ezahlukeneyo kubo bonke abasebenzi abasebenzisa i-PPT kunye nesampulu ebonisa, bameme neengcali zeefektri ukuba zonyuse ulwazi ngakumbi (kubandakanya izinto, umgca wemveliso, itekhnoloji yokuvelisa, iindlela zovavanyo, unyango lomphezulu, ukupakisha, ukuhambisa, ixabiso njl. Ngeli xesha libonisa umlinganiso, liphucula ulwazi lwethu lobuchwephesha kwaye liphucula ukuzithemba kwethu.
Yinto eyamkelweyo ngokubanzi ukuba ukusebenza ngokuzimeleyo kunenzuzo ebonakalayo yokuba inokubonakalisa amandla akho. Nangona kunjalo, ndiyakholelwa ukuba ukusebenzisana kubaluleke kakhulu kuluntu lwanamhlanje kwaye ukusebenzisana kweqela kuye kwaba ngumgangatho ofunwayo ziinkampani ezininzi nangakumbi.
Okokuqala, sime kuluntu oluntsonkothileyo kwaye sihlala sihlangabezana neengxaki ezinzima ezingaphaya kwamandla ethu. Ingakumbi ngalo mzuzu ukusebenzisana kungqina kubaluleke kakhulu. Ngoncedo lweqela, ezi ngxaki zinokusonjululwa ngokulula nangokukhawuleza, ezinokuphucula ukusebenza ngokukuko.
Kwindawo yesibini, ukusebenzisana kunika ithuba lokusebenzisana nomntu osebenza naye, kuya kwenza indawo yokusebenzela enobuhlobo neyonwabisayo, into ebalulekileyo echaphazela inkolelo yabasebenzi kwinkampani njengendawo elungileyo yokusebenza.
Okokugqibela, ukusebenzisana kunegalelo kwimpumelelo yeenkampani. Ngolwazi lwabo bonke abantu abasebenza kunye, iinkampani zinokusebenza ngokukuko kunye nokukwazi ukujongana nazo naziphi na iingxaki. Ngenxa yoko, iinkampani zingenza ngaphezulu kwaye zikhule ngokukhawuleza.
Lilonke, ukusebenzisana kubaluleke kakhulu, akukho mntu unokuhlala yedwa, kufuneka bathembele kwabanye ngandlela thile. Ngenxa yoko, ukusebenza kunye kungenza ubomi bube lula ukuhlangabezana neemfuno zokuphuculwa komntu kunye noluntu olunobunkunkqele.Kufuneka sifunde ukusebenzisana kunye nokulungelelanisa omnye nomnye, yiyo kuphela indlela esinokuthi siphumelele kwaye sizonelise kwaye uluntu.